Konke Okufanele Ukwazi Nge-Sacroilitis [Umhlahlandlela Omkhulu] - Vondt.net
14 / 10 / 2020 /i Hip, rheumatism/av olimalayo
Igama elithi sacroilitis lisetshenziselwa ukuchaza zonke izinhlobo zokuvuvukala ezenzeka ekuhlanganeni kwe-iliosacral. Kwabaningi abaziwa njengesifo sokuvuvukala okhalweni.
Amalunga we-iliosacral angamalunga atholakala ohlangothini ngalunye lwenguquko ye-lumbosacral (emgogodleni ophansi), futhi axhunywe kwi-pelvis. Kulula ukuxhumana phakathi kwe-sacrum ne-pelvis. Kulesi siqondisi uzofunda kabanzi ngalokhu kutholakala, izimpawu zakudala, ukuxilongwa futhi, okungenani, ukuthi kungelashwa kanjani.
Ithiphu enhle: Ngezansi kwe-athikili uzothola amavidiyo wokuzivocavoca amahhala anokuvivinya umzimba kulabo abahlushwa ubuhlungu be-hip ne-pelvic.
- Eminyangweni yethu ehlukahlukene eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kanye noViken (Eidsvoll Sound og I-Råholt) odokotela bethu banekhono elikhethekile elikhethekile ekuhloleni, ekwelapheni nasekuqeqesheni ukuhlunyeleliswa kwezinhlungu ze-pelvic. Chofoza izixhumanisi noma wakhe ukufunda okwengeziwe ngeminyango yethu.
I-anatomy: Akuphi futhi yini amajoyinti e-Iliosacral?
Isingeniso: Yini iSacroilitis?
Ukuzivocavoca Nokuqeqesha eSacroilitis (kufaka ne-VIDEO)
I-Anatomy: Aphi Amalungu E-Iliosacral?
I-anatomy yePelvic - Isithombe: Wikimedia
Emfanekisweni ongenhla, othathwe ku-Wikimedia, sibona ukubuka konke kwe-anatomical kwe-pelvis, i-sacrum ne-coccyx. Njengoba ukwazi ukubona, ithambo le-hip liqukethe i-ilium, i-pubis ne-ischium. Kuyinto ukuxhumana phakathi kwe-ilium ne-sacrum enikeza isisekelo sokuhlanganiswa kwe-iliosacral, okungukuthi indawo lapho laba ababili bahlangana khona. Kukhona eyodwa ngakwesobunxele kanti enye ingakwesokudla. Zibuye zibizwe nangokuthi amalunga okhalo.
I-Sacroilitis ivame ukutholakala njengengxenye yezimpawu zezimo ezahlukahlukene zokuvuvukala kwamathambo emgogodleni. Lezi zifo nemibandela zihlelwe njenge- "spondyloarthropathy", futhi zibandakanya izifo zezifo kanye nokuxilongwa kwamathambo okufana nalokhu:
I-Ankylosing spondylitis (i-Ankylosing spondylitis)
I-Sacroilitis nayo ingaba yingxenye yesifo samathambo esixhunyaniswe nezimo ezahlukahlukene ezifana ne-ulcerative colitis, isifo sikaCrohn noma i-osteoarthritis yamalunga we-pelvic. I-Sacroilitis nayo iyigama kwesinye isikhathi elisetshenziswa ngokungafani negama elithi ukungasebenzi kahle okuhlangene ne-sacroiliac, ngoba womabili la magama angasetshenziswa ngokuchaza ngobuhlungu obuvela ekuhlanganeni kwe-sacroiliac (noma i-SI joint).
Iningi labantu abane-sacroilitis bakhala ngobuhlungu emhlane ongezansi, okhalweni kanye / noma ezinqeni (1). Ngokwesimo sabo, bavame ukusho ukuthi ubuhlungu bungaphezu "kwelilodwa noma womabili amathambo ohlangothini ngalunye lwengezansi" (okwaziwa nge-anatomiki eyaziwa ngokuthi yi-PSIS - ingxenye yamalunga we-iliosacral). Lapha kubalulekile ukusho ukuthi ikakhulukazi ukunyakaza nokucindezela kwamalungu we-pelvic abangela ubuhlungu obukhulu. Ngaphezu kwalokho, ubuhlungu bungachazwa njengoku:
Eminye imisebe esuka emuva engezansi iye esihlalweni
Ubuhlungu obukhulayo lapho ume buqonde isikhathi eside
Ubuhlungu bendawo ngamajoyini okhalo
Ukukhiya esinqeni nasemhlane
Ubuhlungu lapho uhamba
Kubuhlungu ukusukuma lapho uhlala khona umile
Kubuhlungu ukuphakamisa imilenze endaweni yokuhlala
Lolu hlobo lobuhlungu luvame ukubizwa ngokuthi "ubuhlungu be-axial". Lokhu kusho ubuhlungu be-biomechanical obuchazwa ngokuyinhloko endaweni eyodwa - ngaphandle kokuthi kukhanye noma yini ikakhulukazi phansi komlenze noma phezulu emuva. Ngalokho kusho, ubuhlungu be-pelvic bungabhekisa ubuhlungu phansi ethangeni, kepha cishe akukaze kudlule idolo.
Ukuqonda ubuhlungu, kufanele futhi siqonde ukuthi amalunga okhalo enza kanjani. Badlulisa imithwalo eshaqisayo evela emaphethelweni angezansi (imilenze) ngokuya phezulu emzimbeni ongenhla - futhi okuphambene nalokho.
I-Sacroilitis: Inhlanganisela Yezinhlungu Zesifuba Nezinye Izimpawu
Izimpawu ezivame kakhulu ze-sacroilitis ngokuvamile ziyinhlanganisela yalokhu okulandelayo:
Imfiva (ibanga eliphansi, futhi ezimweni eziningi cishe akunakwenzeka ukuyithola)
Ubuhlungu obuphansi emuva nobuhlungu be-pelvic
U-Episodic ubhekise ubuhlungu phansi ezinqeni nasemathangeni
Ubuhlungu obuba nzima lapho uhleli isikhathi eside noma ulele embhedeni
Ukuqina emathangeni nasemhlane ongezansi, ikakhulukazi ngemuva kokuvuka ekuseni noma ngemuva kokuhlala unganyakazi isikhathi eside
I-Sacroilitis iqhathaniswa ne-Pelvic Lock (i-Iliosacral Joint Dysfunction)
I-Sacroilitis nayo iyigama kwesinye isikhathi elisetshenziswa ngokungafani negama elithi pelvic lock, ngoba womabili la magama angasetshenziswa ngokuchaza ngobuhlungu obuvela ekuhlanganisweni kwe-iliosacral. Kokubili i-sacroilitis nokuvinjelwa kwe-pelvic yizimbangela ezivamile zobuhlungu obuphansi emuva, indawo ye-iliosacral kanye nobuhlungu obudluliselwe ezinqeni nasemathangeni.
Kepha kunomehluko obalulekile phakathi kwale mibandela emibili:
Kwezokwelapha emitholampilo, igama elithi "-it" lisetshenziswa njengereferensi yokuvuvukala, ngakho-ke i-sacroilitis ichaza ukuvuvukala okwenzeka kujoyini le-iliosacral. Ukuvuvukala kungabangelwa ukungasebenzi kahle kokuhlangana kwe-pelvic noma kube nezinye izimbangela njengoba kushiwo ngaphambili ku-athikili (ngokwesibonelo ngenxa ye-rheumatism).
Kunezimbangela ezahlukahlukene ze-sacroilitis. I-Sacroilitis ingadalwa yizinkinga zemvelo zamathambo kanye ne-pelvis - ngamanye amagama uma kukhona ukungasebenzi kahle kwamalunga we-pelvic noma uma ukuhamba kwe-pelvis kuphazamisekile. Ngokwemvelo, ukuvuvukala kungabangelwa imishini eshintshiwe emajoyini azungeze amalunga we-iliosacral futhi - ngokwesibonelo, umgwaqo we-lumbosacral. Izimbangela ezivame kakhulu ze-sacroilitis yilezi:
I-osteoarthritis yamajoyini okhalo
Ukungasebenzi Kwemishini (I-Pelvic Lock noma i-Pelvic Loose)
Ukulimala Kokuhlukumezeka Nokuwa (kungadala ukuvuvukala kwesikhashana kwamalunga we-pelvic)
Izici ezinobungozi be-Sacroilitis
Izici ezahlukahlukene zingadala i-sacroilitis noma zenyuse ingozi yokuthuthukisa i-sacroilitis:
Noma yiluphi uhlobo lwe-spondyloarthropathy, olufaka i-ankylosing spondylitis, isifo samathambo esihambisana ne-psoriasis nezinye izifo ze-rheumatological ezifana ne-lupus.
Isifo sokuqaqamba kwamalunga noma i-osteoarthritis yomgogodla (i-osteoarthritis), okuholela ekuwohlokeni kwamalunga we-iliosacral abese ephenduka ukuvuvukala nobuhlungu obuhlangene esifundeni esihlangene se-pelvic.
Ukulimala okuthinta umhlane ongezansi, isinqe noma izinqe, njengengozi yemoto noma ukuwa.
Ukukhulelwa nokubeletha ngenxa yokuthi ukhalo luba banzi futhi selule imithambo ye-sacroiliac lapho izalwa (isisombululo se-pelvic).
Ukutheleleka kokuhlanganiswa kwe-iliosacral
Ukutheleleka ngomgudu womchamo
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifakwa emithanjeni
Uma isiguli sinobuhlungu be-pelvic futhi sinezifo ezingenhla, lokhu kungakhombisa i-sacroilitis.
Ukwelashwa kwe-sacroilitis kuzonqunywa ngokuya ngohlobo nobukhali bezimpawu isiguli esinazo, kanye nezimbangela eziyisisekelo ze-sacroilitis. Uhlelo lokwelashwa ludluliselwa esigulini ngasinye. Isibonelo, i-ankylosing spondylitis (i-ankylosing spondylitis) ingaba yisifo esihlangene sokuvuvukala, bese kuthi ukwelashwa kufanele kuguqulwe ngokufanele. Ukwelashwa ngokomzimba kuvame ukwenziwa yi-physiotherapist evunyelwe esidlangalaleni (kufaka phakathi i-MT) noma i-chiropractor. Ukwelashwa ngokomzimba kunomphumela obhalwe kahle ebuhlungu obuhlangene be-pelvic, i-asymmetry ye-pelvic nokungasebenzi kahle esifundeni se-pelvic (2).
I-Sacroilitis imvamisa iqukethe ukusabela kokuvuvukala nokungasebenzi kahle kwemishini. Ngakho-ke, ukwelashwa kaningi kuqukethe kokubili izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala kanye nokwelashwa ngokomzimba. Singathanda ukubona inhlanganisela yendlela elandelayo yokwelashwa kwe-sacroilitis nobuhlungu be-pelvic:
Imithi elwa nokuvuvukala (eqeda ukuvuvukala) - evela kudokotela
Ukwelashwa Kwemizimba Namajoyinti (i-Physiotherapist ne-Modern Chiropractor)
Ukwelashwa okuhlangene ngokumelene nokukhiya kwe-pelvic (Ukugqugquzela ukuhlanganiswa kwe-Chiropractic)
Ukuzivocavoca Kwasekhaya Nokuziqeqesha
Ezimweni ezinzima kakhulu, imijovo ye-cortisone ingahle ifanele
Amacebiso: Ukushintsha indawo yakho yokulala kungasiza ekudambiseni izinhlungu ngenkathi ulele nalapho uvuka. Iningi leziguli likuthola kungcono ukulala eceleni nomcamelo obekwe phakathi kwemilenze yawo ukugcina okhalweni lwawo ulingana. Abanye futhi babika imiphumela emihle ngokusebenzisa ukudla okulwa nokuvuvukala.
Kunconyiwe Ukuzisiza ngobuhlungu be-pelvic
I-Pelvic cushion (Isixhumanisi sivuleka efasiteleni elisha lesiphequluli)
Kungenzeka ukuthi uyazi ukuthi abantu abaningi mayelana nokukhulelwa bathola ubuhlungu be-pelvic? Ukuze uthole indawo yokulala e-ergonomic eyengeziwe, eziningi zalezi zisebenzisa lokho okuvame ukubizwa ngokuthi umcamelo we-pelvic. Umcamelo uklanywe ngokukhethekile ukuthi usetshenziswe lapho ulala, futhi wakheke ngendlela yokuthi ube ntofontofo futhi kube lula ukuwubeka endaweni efanele ubusuku bonke. Kokubili lokhu nokuthi yini ebizwa coccyx izincomo ezimbili ezivamile kulabo abahlukunyezwa yi-pelvic kanye ne-sacroilitis. Inhloso ukunciphisa ukungahambi kahle nokucasuka kwamalunga e-pelvic.
Ezinye Izinyathelo Zokuzenzela Zoma-Rheumatists
kokucindezela Noise (Ezifana kokucindezelwa amasokisi anomthelela omkhulu ngo kwegazi ukuze imisipha obukhulu noma amagilavu ​​wokucindezela aguqulelwe ngokukhethekile ngokumelene nezimpawu ze-rheumatic ezandleni)
Ukhilimu we-Arnica noma isixhobo sokushisa (ingaqeda ubuhlungu emisipha namalunga)
Ukwelashwa kwe-Chiropractic ye-Sacroilitis
Ezigulini ezinobuhlungu be-pelvic, izinqubo ezahlukahlukene ze-chiropractic zingasetshenziswa, futhi zivame ukubhekwa njengesinyathelo sokuqala senqubo yokwelashwa - ngokuhlanganiswa nokuzivocavoca kwasekhaya. I-chiropractor yesimanje izoqala ngokuhlola ngokuphelele ukusebenza. Uzobuza ngomlando wakho wezempilo, phakathi kokunye ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini izifo ezikhona noma okunye ukungasebenzi kahle kwemishini.
Umgomo wokwelashwa kwe-chiropractic yobuhlungu be-pelvic ukusebenzisa izindlela ezibekezelelwa kangcono yisiguli, futhi ezihlinzeka ngomphumela omuhle kakhulu. Iziguli ziphendula kangcono ezinkambisweni ezahlukahlukene, ngakho-ke i-chiropractor ingasebenzisa amasu ahlukahlukene ukwelapha ubuhlungu besiguli.
I-Chiropractor Yesimanje Iphatha Imisipha Namajoyinti
Lapha kubalulekile ukusho ukuthi udokotela wezokwelapha wanamuhla unamathuluzi amaningana ebhokisini lakhe lamathuluzi, nokuthi alapha ngazo zombili izindlela zamasipha nokulungiswa ngokuhlanganyela. Ngaphezu kwalokho, leli qembu lomsebenzi livame ukuba nobuchwepheshe obuhle ekwelashweni kwegagasi lengcindezi nasekwelapheni inaliti. Okungenani kunjalo imitholampilo yethu esebenzisana nayo. Izindlela zokwelapha ezisetshenzisiwe zingathanda ukufaka:
Ukugqugquzela Okuhlangene Nokuphathwa Okuhlangene
Izindlela Zokumasaja Nezemisipha
Ukwelashwa yokudonswa (Decompression)
Imvamisa, esimweni sezinkinga ze-pelvic, ukwelashwa ngokuhlanganyela, ukwelashwa kwemisipha ye-gluteal namasu okudonsa kubaluleke kakhulu.
Ukuxhaphaza okuhlangene nobuhlungu be-pelvic
Kunezindlela ezimbili ezijwayelekile zokukhohlisa i-chiropractic ngezinkinga ezihlangene zethambo:
Ukulungiswa kwendabuko kwe-chiropractic, okubizwa nangokuthi ukuxhaphaza okuhlangene noma i-HVLA, kunikeza imizwa ngejubane eliphezulu namandla aphansi.
Ukulungiswa / ukulungiswa okuncane okubizwa nangokuthi ukugqugquzela ngokuhlanganyela; phonsa ngejubane eliphansi nangamandla aphansi.
Ukuthuthuka kulolu hlobo lokulungiswa kuvame ukuholela ekukhishweni okuzwakalayo okubizwa nge- cavitation, okwenzeka lapho i-oxygen, i-nitrogen ne-carbon dioxide yeqa ijoyinti lapho yadonswa yadlula khona ekuhambeni kokuhamba ngaphakathi kwemingcele yezicubu. Lo mshini we-chiropractic udala "umsindo wokuqhekeka" ojwayelekile ovame ukuhambisana nokukhohlisa okuhlangene futhi lokho kuzwakala ngathi "ukugqashula amaqupha".
Yize le ncazelo "yokwephula" yokuphathwa kwe-chiropractic inganikeza isithombe sokuthi lokhu akukuhle, umuzwa empeleni uyakhulula, kwesinye isikhathi cishe ngokushesha. I-chiropractor izofuna ukuhlanganisa izindlela zokwelashwa eziningana ukuze zibe nomphumela omuhle kakhulu esithombeni sobuhlungu besiguli nomsebenzi.
Ezinye Izindlela Zokuhlanganisa Ngokuhlanganyela
Izindlela zokusebenzisa amandla ezinamandla ezinamandla amancane zisebenzisa amasu wejubane eliphansi avumela ukujoyina ukuthi kuhlale ngaphakathi kwamazinga wokuhamba angenzi lutho. Amasu amaningi we-chiropractic afaka phakathi:
Inqubo "yokwehla" emabhentshini e-chiropractor enziwe ngokukhethekile: Leli bhentshi liqukethe izigaba eziningana ezingafakwa phezulu bese zehliswa ngasikhathi sinye lapho i-chiropractor iqhubekela phambili, evumela amandla adonsela phansi ukuthi abambe iqhaza ekulungisweni okuhlangene.
Ithuluzi elikhethekile lokulungisa elibizwa ngokuthi i-Activator: I-activator iyithuluzi elilayishwe entwasahlobo elisetshenziswa ngesikhathi senqubo yokulungisa ukudala ukushaya kwengcindezi okuphansi ngokuqhathaniswa nezindawo ezithile ezisemgogodleni.
Inqubo "yokuphazanyiswa kwe-flexion": Ukuphazamiseka kwe-Flexion kufaka ukusetshenziswa kwetafula elenzelwe ngokukhethekile elelula umgogodla ngobumnene. Ngakho-ke i-chiropractor iyakwazi ukuhlukanisa indawo yezinhlungu ngenkathi umgogodla ugobile ngokunyakaza kokumpompa.
Kafushane: I-Sacroilitis ivame ukwelashwa ngokuhlanganiswa kwemithi elwa nokuvuvukala kanye nokwelashwa ngokomzimba.
Ingabe Uhlushwa Ubuhlungu Bomzimba Oze Buqhubeke?
Ukuzivocavoca Nokuziqeqesha Ngokulwa neSacroilitis
Uhlelo lokuzivocavoca ngokuzivocavoca umzimba, amandla nokuqeqeshwa okulula kwe-aerobic cardio ngokuvamile luyingxenye ebalulekile yemithi yokwelashwa esetshenziselwa i-sacroilitis noma ubuhlungu be-pelvic. Ukuzivocavoca ekhaya ngokwezifiso kungabhalwa udokotela wakho wezitho zomzimba, udokotela wezinhlungu noma abanye ochwepheshe bezempilo abafanele.
Kule vidiyo engezansi, sikukhombisa ukuzivocavoca umzimba okungu-4 kwe-piriformis syndrome. Isimo lapho imisipha ye-piriformis, ngokuhlangana nejoyini le-pelvic, ifaka ingcindezi nokucasula kwi-nerve ye-sciatic. Lezi zivivinyo zihambisana kakhulu nalabo abahlushwa ubuhlungu be-pelvic, njengoba zisiza ukukhulula isihlalo futhi zinikeze ukunyakaza okuhlangene kwe-pelvic okungcono.
IVIDEO: Izingubo ezi-4 zokuzivocavoca zePiriformis Syndrome
1. Slobodin et al, 2016. «Acute sacroiliitis». I-Rheumatology Yomtholampilo. 35 (4): 851-856.
2. U-Alayat et al. 2017. Ukusebenza kokungenelela kwe-physiotherapy kokungasebenzi ngokuhlanganyela kwe-sacroiliac: ukubuyekeza okuhlelekile. J Phys Ther Sci. I-2017 Sep; I-29 (9): 1689-1694.
Isifo samathambo se-Autoimmune I-Fibromyalgia ne-Plantar Fascitis